Izindlela zokufinyelela kudeskithophu ekude kusuka kuthebhulethi ye-android.
Izimfanelo zokusakaza-bukhoma, ukulungiselelwa okokufaka kanye nama-hotkey kuyakhipha...
ube nendawo esebenzisekayo kuthebhulethi ukuze uyihlele (nge-emacs).
Sebenzisa ithebhulethi njengeklayenti elincanyana ukuze uhlele ideskithophu efanele.
I-VNC futhi I-RDP ibonakala ihamba kancane, kodwa kufanele isebenzise ibhethri kakhulu, i-RDP kufanele ibe ngcono kakhulu ku-Windows okungenani.
I-Splashtop ibonakala ndawana thize phakathi, hhayi ukubambezeleka okuhle kanye ne-framerate ephansi, kodwa izilawuli zokufaka ezinhle.
NOMshini (I-NX protocol) ibonakala ingcono kancane kune-splashtop, iyalungiseka futhi iguquguquka kune-splashtop.
Ukukhanya kwenyanga (iklayenti) futhi ukukhanya kwelanga (server) (Ngine-AMD R9 290 endala) ibonakala isebenza kahle ku-30FPS, kanti ku-60FPS inokubambezeleka okukhulu.
I-Parsec . Lena ibonakala ine-latency ehamba phambili (ku-60FPS) kodwa angizange ngihlole ukusetshenziswa kwebhethri, okwamanje yiyona engiyisebenzisayo.
Ngisebenzisa i-tablet/w mechanical keyboard ngoba amakhompyutha aphathekayo anamakhibhodi asebenza kahle awekho ngempela...ingabe akhona? Noma zikhona ziyabiza kanti ikhibhodi iyabiza isicabanoma kunjalo. Ukugcina isikrini siku-engeli efanele yokubuka kudinga isitendi, noma esinye salezo zibambi ezinenduku egobekayo, enokubambelela kazibuthe noma izinsimbi.
Nginamathisela ikhibhodi yomshini kuthebhulethi, nge Isiguquli se-OTG . I-Bluetooth izolunga nayo... Inkinga amamephu e-android amanye okuvamile izinqamuleli ezisetshenziswa kumafasitela, ezisebenzisa nomaMETA (ALT ) nomaMETA (ukhiye wewindi). Futhi ayinikezi indlela yokuyikhubaza. KeyMapper kancane iyasebenza, ngoba ingakhubaza isenzo ohlangothini lwe-android, kodwa angikwazi ukudlulisela phambili izinhlanganisela zokhiye.
Ukude noma umdabu?
Ingabe ukusebenzisa iklayenti elikude konke kuhle kodwa? Mhlawumbe ukusebenzisa i-emacs ngqo ku-android futhi ukusebenzisa amandla okukude emacs kuwukusetha okuhambisana kakhulu? Ukufaka ama-emacs ku-android kufanele usebenzise ama-chroots. UmsebenzisiLand yenza kube lula ukudala ama-chroots wokusabalalisa okuvamile futhi uqale ngokuqondile i-XServer. Nokho ukuba nolwazi olufanele lwama-emacs kudinga ukucushwa okuningi. Ingabe i-emacs-nox ku-termux ingaba ngcono kune-emacs-gtk ngokusebenzisa i-userland/VNC? I-Termux inokusekelwa kwe x11 izinhlelo zokusebenza . Isebenzisa i-Xwayland ukuze inikeze ukusekelwa kwe-X11 kwezinhlelo zokusebenza, ibonakala ishesha kakhulu kuneseva ye-xsdl x11, ngoba (ngiqagele) isebenzisa inkumbulo eyabiwe yokubhafa kokusakaza (esikhundleni se-TCP noma amasokhethi e-unix). Akukabikho ukwesekwa kokusheshisa kwe-HW, ithebhulethi yami iphethe i-POWERVR GPU noma kunjalo engakabi nalo uhlobo lwabashayeli bemithombo evulekile (kodwa ngokusobala ihlelelwe ukukhishwa ndawana thize ku-Q2 2022). Ngiphinde ngagijima ngempumelelo a linuxdeployi-chroot emisiwe engenawo umsuka ongaphezulu wesiphakeli se-termux-x11. Nokho i-chroot kufanele ifane nenguqulo ye-wayland (futhi mhlawumbe ne-mesa nayo) ye-termux.
Uma kucatshangelwa izindleko zokucushwa zokuqalisa i-emacs kuthebhulethi ye-android, ngalesi sikhathi iseshini ekude isasebenza kakhulu. Uma imizamo ye-X11 termux kanye nokukhululwa komshayeli we-powervr ekugcineni kuphumelela ibhalansi ingase ishintshe iye ekusethweni komdabu.
Ukube ama-emacs abenokusekela isitaki sezithombe ze-android ngabe akusekho ukukhetha okuningi, kodwa akunjalo, futhi ngokusobala akukho ntshisekelo kuyo, (kukhona nentshisekelo engathi sína kusixhumi esibonakalayo sokuthinta, ngakho-ke okuhle kakhulu. inketho yokusebenzisa ama-emacs kumadivayisi aphathwayo ngaphandle kwekhibhodi efanele kuleli phuzu kungaba emacspeak).
I-NixOnDroid ingadambisa izinhlungu zokucushwa zokwengeza zonke izinsiza ezidingekayo ngama-emacs, kungaba lokho noma ukusekelwa kwe-nix okuzayoarm64.
Kusenenkinga yokuthi ezinye izinqamuleli zekhibhodi azidluli, lapho umsebenzi ojwayelekile uwukuzibeka kwezinye izinqamuleli, sibonga ukuthi kukhona okunamandla kakhulu. uhlelo lokusebenza lokuhlela ukhiye lwe-android . Kuzodingeka ngihlole ukusetshenziswa kwebhethri le-parsec, futhi uma liphezulu kakhulu ngizocabangela i-RDP engenalutho, noma iseshini elula ye-ssh ene-emacsi kutheminali.
Thumela Amathegi: izinhlelo zokusebenza, isoftware, ubuchwepheshe, amathuluzi